सामुदायिकमा नपढाए सेवाबाट वञ्चित- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
सामुदायिकमा नपढाए सेवाबाट वञ्चित
वैशाख ३, २०७५ ज्योति कटुवाल
दैलेख — नारायण नगरपालिका २ को जाहारकोटमा बाजागाजासहित घरदैलो गरी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । नयाँ विद्यार्थी खोज्दै विद्यालयले भर्ना अभियान सुरु गरेको हो ।
वडा नं २ मा तीन सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यहाँका अभिभावकले छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नपढाए नगर र वडाबाट दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
वडा नं २ का ३ वटा विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन आए एक हजार रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न अभिभावकलाई तालिम दिन लागिएको छ ।
‘हामीलाई बालबच्चा दिनुस्, हामी विकास दिन्छौं’ भन्ने नारासहित भर्ना अभियान सुरु गरिएको वडा नं. २ का अध्यक्ष रेशम थापाले बताए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु गरिएको जनाए । उनले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारिएको बताए । उनका अनुसार सरकारी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरे वर्षभरिको तिरो (शुल्क) नि:शुल्क गर्ने तयारी भएको छ ।
अभियान सञ्चालन भएपछि एकै दिनमा ५१ नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिएको जनता मावि कोटथाप्लाले जनाएको छ । विद्यालयले अन्य विद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीको भर्ना गर्ने क्रम जारी राखेको जनाएको छ । पढाइलाई प्रभावकारी र शिक्षकको नियमित उपस्थितिका लागि योजना बनाएर विद्यालयलाई नमुना बनाइने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश थापाले बताए ।
५५ वर्षीयाको पढाइ मोह
नारायण नगरपालिका २ जारकोटका ५५ वर्षीया जयबहादर सुनार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै कक्षा १ मा भर्ना भएका छन् । उनले आफूसँगै नातिनी सरस्वतीको पनि भर्ना गराए । ६ छोराछोरी र १३ नातिनातिका हजुरबुबा सुनारले नियमित विद्यालय आउने जनाएका छन् । उनी खड आधारभूत विद्यालयमा कोलटाकुरामा कक्षा १ मा भर्ना भएका हुन् । उमेर हुँदा पढ्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएको र अहिले पढ्न पाए केही गर्न सक्छु भन्ने जाँगरले आफू विद्यालयमा भर्ना भएको उनको भनाइ छ । उनी एक हप्ता अगाडि बिरामी भएर नेपालगन्ज पुगेका थिए तर उनी हराए । त्यहाँ हराएपछि नपढेकै कारण यस्तो भएको भन्ने लागेर कक्षा १ मा भर्ना भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि मलाई मन भित्रैबाट पढ्नुपर्छ भन्ने जाँगर आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ आएर कक्षा १ मा भर्ना भएको हुँ ।’ उनले शरीरले धानुन्जेल आफूले अध्ययनलाई निरन्तरता दिने जनाए ।
उनी भर्ना भएको देखेर अन्य स्थानीयसमेत उत्साहित भएको नारायण नगरपालिका २ का वडाअध्यक्ष रेशम थापाले बताए । उनलाई एक हजार पोसाक खर्च प्रदान गरिएको वडा अध्यक्ष थापाले बताए ।
अनाथको पढ्ने धोको
बाबुआमा नभएकाले रहर भएर पनि पढ्न पाएका थिएनन्
वैशाख ३, २०७५ वीरेन्द्र केसी
अर्घाखाँची — पढ्ने रहर छ तर बाबुआमा छैनन् । ७ वर्षअघि आमा र एक वर्षअघि बाबु बिते । बाबुको निधनपछि पढाइ खर्च भएन । त्यसपछि छाक टार्न होटलमा भाँडा माझ्न थाले । तिनै सन्धिखर्क नगरपालिका २ भन्द्रीखोलाका १३ वर्षीय राजु मुखिया आइतबार चुत्राबेंसीको गंगा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ मा भर्ना भए ।
नगर प्रमुख कमलप्रसाद भुसाल, उपप्रमुख ठाकुर विक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लीलबहादुर राउत र प्रध्यानाध्यापक प्रदीप भण्डारीले स्कुलको २८ औं वार्षिकोत्सवमा झोला, किताब, कापी, पेन, एक जोर जुत्ता, कपडा हातमा थमाएर भर्ना गरे । दुई कक्षासम्म पढेका उनी बाबुको निधनपछि बेसहारा बनेका थिए । ५ महिनादेखि सन्धिखर्कको एक होटलमा भाँडा माझेर बसेका थिए । अबिरमालाले स्वागत गरेपछि उनी पढ्न पाइने भन्दै हर्षित भए । कापीकिताब हातमा लिएर कक्षाकोठाभित्र हेरे । ‘मैले पढ्ने कोठा राम्रो रहेछ,’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।’
भाँडा माझ्दा हातमा घाउ छन् । ‘अब त मेरो हातमा पनि कापीकिताब हुने भए,’ उनले खुसी साटे, ‘पढ्ने रहर छ ।’ ६ भाइबहिनीमध्ये उनी माइला हुन् । जेठो दाजु ३ कक्षासम्म पढेपछि खर्च अभावले सन्धिखर्ककै होटलमै काममा बसे । एक भाइ शिशुमा भर्ना, कान्छो सानै छन् । दुई बहिनीलाई काठमाडौंमा एमाले जिल्ला नेता रामचन्द्र पोखरेलले पालनपोषण र शिक्षा दिएका छन् । बाबुआमाले मजदुरी गरेर पालेका थिए । बाबुआमा नभएपछि सबैलाई संकट पर्‍यो । मुखिया कान्छीआमाको घरमा बसेका छन् । उनले अब नि:शुल्क पढ्न पाउने भए ।
‘पढ्ने रहर त छ तर के गर्ने अभिभावक छैनन्,’ मनिलो स्वरमा भने, ‘पढेर डाक्टर बनी बिरामीको सेवा गर्ने धोको छ । कसले पढाउला म टुहुरोलाई ।’ पहिले आमा बित्नु भो । बाबुले पाल्नुभएको थियो । उहाँले पनि हामीलाई छाडेर गएपछि बेसहारा बन्यौं । यही स्कुलमा कक्षा दुईसम्म पढ्दै थिएँ । बाबुको निधनपछि होटलमा भाँडा माझ्दाका दिन रुँदै बिते । ‘दाइले मलाई भाइ तिमी पढ, खर्च मैले दिन्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘दाइले पनि पढेको देख्न पाए म खुसी हुने थिएँ । तर, कसरी पढ्ने बिहान–बेलुका खाने कुरा कसले जुटाइदेला र ? हामी टुहुरा त्यसमा पनि पैसा र सम्पत्ति नभएका ।’
उनलाई साँझ–बिहान कान्छीआमाले खान दिन्छिन् । डाक्टर पढ्न कति खर्च लाग्छ उनलाई थाहा छैन । ‘बिरामीको सेवा गर्ने इच्छा छ तर कसरी सम्भव होला र हामीजस्ता टुहुरालाई,’ उनले भने । इकाइ प्रमुख राउतले मुखियासहित गरिब बालबालिकाका लागि नि:शुल्क भर्ना गरिने बताए । स्टेसनरी पालिकाले उपलब्ध गराउने छ ।
गंगा आधारभूत विद्यालयको कक्षा ३ मा मुखियालाई भर्ना गरेर अभियान सुरुवात भएको उनले उद्घोष गरे । ‘यस वर्ष कोही पनि स्कुलबाहिर नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले अभियानलाई तीव्रता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि १४ गतेसम्म पहिलो चरणको अभियान हुने छ । १५ देखि ३० सम्म छुटेकालाई घरदैलोमा पुगेरै भर्ना गर्छौं ।’ सबै स्कुलका शिक्षक, अभिभावक, दलका नेतासहित सरोकारवालाई परिचालन गरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने प्रचारात्मक अभियान थालिएको राउतले बताए । गंगाका प्रअ भण्डारीले पढाइ राम्रो भएकाले अभिभावकको रोजाइ यही स्कुल भएको दाबी गरे । यसपालि अभियान चलाएर धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्छौं, उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
अविरल वर्षाले ५ दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध